10 Toerana fanofana fialan-tsasatra mahafinaritra any Eropa | Save A Train
Home > Travel Europe > 10 Toerana fanofana fialan-tsasatra mahafinaritra any Eropa
(Last Nohavaozina: 11/06/2021)
ny fiainana manokana, 5-trano fandraisam-bahiny kintana, mahatalanjona ny fomba fijeriny, sy ny toerana, ny manaraka 10 teboka efa nahazo izany rehetra izany. Ireo 10 Ny toerana fanofana fialan-tsasatra mahafinaritra any Eropa dia voahodidin'ny natiora mahavariana ary miaraka amin'ny tombam-bidy mahavariana.
1. Toerana fanofana fialan-tsasatra mahatsiravina any Frantsa: Provence
Trano tranobe vato, villa frantsay taloha, ny tendrombohitra Dentelles de Montmirail tsara tarehy, Provence dia iray amin'ireo 10 toerana fanofana fialan-tsasatra mahafinaritra indrindra any Eropa.
Voalohany, Ny fifohazana amin'ny hanitra lavender sy ny fakana serizy amin'ny hazo dia iray amin'ireo zavatra tsara indrindra hatao any Provence. Faharoa, Ny fiderana ny Mont Ventoux tsara tarehy avy amin'ny varavarankelin'ny tranon'ny tanindrazanao dia hihoatra ny nofy rehetra nanananao tamin'ny fialantsasatra tonga lafatra.
Ao Provence, manana safidy fialofana fialan-tsasatra betsaka ianao: Trano fiompiana, raitra, sy trano bongony mahavariana. Ny fanofana fialan-tsasatra rehetra dia feno fitaovana hampiantranoana fianakaviana miaraka amin'ny ankizy, na vondrona namana.
From $136 hoan'ny 2 efitrano fatoriana ho any $350 ho an'ny villa, isaky ny alina.
2. Toerana fanofana fialan-tsasatra tsara indrindra any Eropa any Italia: Tuscany
Ny lohasaha divay Tuscan dia toerana fanofana fialan-tsasatra mahafinaritra any Italia. Ireo havoana silky dia toerana mahafinaritra ho an'ny fialantsasatra miala sasatra. Ohatra, ilay nosy Giglio manaitra, na ny monasiteran'ny Franciscan any La Verna, dia hetsika milamina tsara any amin'ny faritra Tuscan mahafinaritra.
Fanampin'izany, mifoha maraina, miala amin'ny trano fiompiana ambanivohitra mankamin'ny fahitana tsara an'i Tuscany – dia tsy voavidim-bola. Eto, afaka misafidy ny mangatsiaka eo akaikin'ny dobo manokana miaraka amina divay vera ianao, na mandeha mitsangatsangana divay.
raitra, trano, sy trano bongo.
$68 ny $200 isaky ny alina.
Hetsika ho an'ny ankizy: antoka! Mandritra ny fotoana mahafa-po ny olon-dehibe, ny ankizy dia manana fipoahana ao amin'ny zaridainan'i Pistoia na Cavallino Matto Parka fialana voly in Livorno.
Florence mankany Grosseto miaraka amina lamasinina
Perugia mankany Grosseto miaraka amina lamasinina
Viterbo mankany Grosseto miaraka amina lamasinina
Roma mankany Grosseto miaraka amina lamasinina
3. Toerana fanofana fialan-tsasatra tsara indrindra any Angletera: Angletera Andrefana
Morontsiraka mahavariana, trano bongony vato, filentehan'ny masoandro tsara tarehy, sy fitoniana, ataovy South West England ho toerana fialan-tsasatra mety any ambanivohitra anglisy. Ankoatry ny, ny tanàna amoron-tsiraka mahafinaritra an'i Devon sy Dorset dia nitahiry ny hatsarany nandritra ny taona maro ary nijoro tamim-pahasahiana teo am-pelatanan'ny fotoana sy ny rivotra masira.
Mandeha amin'ny morontsiraka volamena, mankafy an'i Simon Old Harry vato, na ny Jurassic Coast, gadona vaky tanàna amin'ny fotoana rehetra. Mandritra ny fijanonany eto, ho tsapanao fa mandeha miverina amin'ny fotoana taloha ianao hatramin'ny vanim-potoana prehistorika ka hatramin'ny 17faha taonjato. Ny tontolo miaraka aminao dia milaza tantara momba ny fotoana sy ny fizotran'ny natiora eto amin'ity faritr'i Angletera ity, raha ireo trano rantsan-kazo vita amin'ny ala na mahazatra dia hilaza aminao ny fiainana sy ny kolontsaina any West England.
Noho izany, raha liana amin'ny kolontsaina anglisy ianao, zaridaina, maritrano, ary ny angano – dia ho hitanao fa i West England dia manana ny sasany amin'ireo toerana fialan-tsasatra mahafinaritra any Eropa.
$70- 320 isaky ny alina
4. Toerana fanofana fialan-tsasatra mahafinaritra any Suisse: Nanketo Alpes eto Soisa
maherin'ny 10,000 zavatra ilaina safidy, ny Nanketo Alpes eto Soisa dia toerana fanofana fialan-tsasatra mahafinaritra any Eropa. Tendrombohitra Swiss Alpes mahatalanjona, manolotra ny fomba fijery tsara indrindra, tontolo, lalana, toerana manodidina, fananana fanofana fialan-tsasatra marobe, hampilatsaka ny valanoranonao izany.
Ny iray amin'ireo zavatra tsara indrindra amin'ny hofan-trano fialan-tsasatra any amin'ny Alpes Soisa dia ny misy trano ho an'ny tsiro sy vondrona rehetra. Ho an'ny fianakaviana, vondrona namana, miaraka amin'ny tubo mafana any ivelany, chalets, fahitana an-tendrombohitra na lohasaha - Ny Alpes Soisa dia maro samihafa ka izy ireo no toerana mety hofan-trano fialan-tsasatra sahaza ho an'iza.
Noho izany, izao dia mila mifantina fotsiny ianao toerana ivelan'ny lalana nokapohina toa an'i Lucerne, na lohasaha ny riandrano, farihy Maggiore na fahitana any an-tendrombohitra amin'ny dianao mankany amin'ny fialantsasatra tsy hay hadinoina indrindra.
Chalets, kabine hazo, trano, na trano.
From $92 ho an'ny trano fonenana $265 isan-kariva ho an'ny chalet manokana na trano misy fahitana amin'ny farihy.
5. Toerana fanofana fialan-tsasatra mahatsiravina any Frantsa
Frantsa dia toerana hanofa trano fialan-tsasatra mahafinaritra any Eropa. Miaraka amin'ny toerana tsara tarehy sy marobe, Hitanay fa sarotra be ny misafidy toerana fampanofana fialan-tsasatra mahafinaritra ho an'ny fialantsasatra frantsay manaraka.
Ohatra, Biarritz no manana morontsiraka mahavariana indrindra, raha ny lohasaha Dordogne kosa dia manome fahitana an-tendrombohitra sy renirano mahatalanjona.
Na toerana fanofana fialan-tsasatra fidinao, ny fanofana fialan-tsasatrao mahavariana dia ho feno fitaovana, miaraka amin'ny zaridaina mahafinaritra, ary any amin'ny faritra tsara tarehy indrindra any Frantsa.
Any Brittany, ho hitanao ny trano mimanda ho an'ny hofan-trano fialan-tsasatra, na trano kely misy lalan-kely mankany amin'ny morontsiraka mahafinaritra.
$75 – $145 isaky ny alina
Nantes hitsangatsangana miaraka amin'ny lamasinina
Lille mankany Tours miaraka amin'ny lamasinina
Lille mankany Paris Miaraka lamasinina
Fitsidihana an'i Paris miaraka amina lamasinina
6. Toerana fanofana fialan-tsasatra mahafinaritra any amin'ny Repoblika Czech: Bohemia
Bohemian Switzerland dia iray amin'ireo faritra mahafinaritra any Eropa. Misaotra ireo tendrombohitra sandstone mahatalanjona sy fahitana ny renirano Elbe, Parisy fialan-tsasatra i Czech Switzerland. Noho izany, toerana fanofana fialan-tsasatra mahafinaritra any Eropa izy io.
Manome fomba fijery mahatsikaiky ity toerana ity, làlana fitsangantsanganana maro, family toerana fitsangantsanganana, ary renirano hilomano.
Trano maoderina manakaiky ny natiora, sy ny fiainan'i 100 tapitrisa taona. Ny tanànan'i Decin dia toerana mahafinaritra hanofana ny tranonao lavitra ny trano.
$90 – $150 isaky ny alina
7. Toerana fanofana fialan-tsasatra mahafinaritra any Austria: Styria
Any atsimo atsinanan'i Aotrisy, ny tontolon'ny Alpine Styrian dia iray amin'ireo tsara tarehy indrindra any Aotrisy. Ary noho izany, Styria dia toerana fialan-tsasatra mahafinaritra any Eropa: ny fomba fijery, ny glacier, kijana maitso, sy ny natiora mahafinaritra.
Ho fanampin'ny fomba fijery mahafinaritra sy ny dia an-tongotra, any Styria, hiala sasatra tanteraka ianao aorian'ny fitsidihana ny loharano mafana voajanahary. -tsy izany, misaotra ireo hazo paoma sy tanimboaloboka maro, azonao apetraka ny lohanao, na mankafy picnic matsiro.
kabine hazo, villa misy dobo, chalets.
$65 – $200 isaky ny alina
8. Toerana fanofana fialan-tsasatra mahafinaritra: London
Londres dia iray amin'ireo toerana hanofana fialan-tsasatra mahafinaritra indrindra any Eropa satria tanàna misy safidy tsy misy farany izy io. Eto ianao dia hahita faritra manodidina tsy manam-paharoa sy tsara tarehy, miaraka amina maritrano samihafa, kolontsaina, ary vibe. Notting Hill dia manonofinofy, Hampstead Heath dia nentim-paharazana sy mamelana, ary Kensington dia malaza sy maody. Ireto misy ohatra vitsivitsy fotsiny amin'ireo toerana mahatalanjona amin'ny famandrihana ny hofan-trano fialan-tsasatra manaraka tsy lavitra ny trano.
Ary, London dia manolotra fahitana maro, tsena, tranombakoka, ary zaridaina ho an'ny karazana tsiro sy fialan-tsasatra. Ary noho izany, London dia ho fandresena tanteraka ho an'ny a fialan-tsasatry ny fianakaviana any Eropa miaraka amin'ny ankizy: valan-javaboary fialamboly, fivarotana mofomamy tsara indrindra, ary Harry Potter mazava ho azy.
Fanofana trano ao afovoan'i Londres, sy trano ivelan'i Londres, depending on the zone.
9. Toerana fanofana fialan-tsasatra mahafinaritra any Alemana: Bavaria
I Bavaria dia iray amin'ireo faritra mahafinaritra indrindra any Alemana, indrindra amin'ny lohataona. Manomboka amin'ny Alpes ka hatrany amin'ny renirano Danube, mozika, sy ny sakafo matsiro any Bavière, amin'ny zavatra maro tokony hatao, ny 10-fitsangatsanganana an-andro any Bavaria Mety tsy ho ampy ny mankafy izay rehetra atolotry ity toerana mahatalanjona ity.
Noho izany, tokony mikasa mialoha ianao amin'ny fialantsasatrao any Bavaria. Satria i Bavaria dia iray amin'ireo toerana fialan-tsasatra tianao indrindra any Alemana, ho an'ny mponina sy ny mpizahatany, Ny hofan-trano fialan-tsasatra dia mazàna hamandrihana volana vitsivitsy mialoha. Ho fanampin'ny famandrihana trano, hanao izay tsara indrindra amin'ny fialan-tsasatrao any Bavarian, mikaroha ary mamorona lisitr'ireo toerana ambony sy hetsika tokony hataonao, ary manaova làlan-kaleha ankapobeny.
raitra, trano, sy trano.
$80- $350 isaky ny alina
10. Toerana fanofana fialan-tsasatra mahafinaritra any Italia: Lake Como
Ny Lake Como dia iray amin'ireo toerana fialan-tsasatra malaza any Italia. Na eo aza ny zava-misy dia mety hipoka be izy io amin'ny vanim-potoana fahavaratra, ilay farihy mahavariana sy fahitana any an-tendrombohitra, miaraka amin'ny rivo-piainana milamina, apetraho ao amin'ny 10 toerana fanofana fialan-tsasatra mahafinaritra indrindra any Eropa.
Ny fotoana mety indrindra fialantsasatra ao amin'ny farihin'i Como dia eo anelanelan'ny martsa ka hatramin'ny novambra, rehefa Jolay-Aogositra no volana mafana sy be atao indrindra. Noho izany, tena ilaina tokoa ny manao ny fikarohana mialoha. Ary noho izany, ny zava-dehibe indrindra dia ny manamarina ny toeram-ponenana sy ny lafy tsara ary ny lafy ratsy amin'ny famandrihana trano fialan-tsasatra ao amin'ny farihy, ho an'ny ampahany amin'ny taona.
Villas mihaja, trano, chalets, sy trano bongo.
$40 isan'andro mankany $500 isan-kerinandro
eto amin'ny Save A Train, ho faly izahay hanampy amin'ny drafitra fitsangatsanganana any amin'ny 10 toerana fanofana fialan-tsasatra mahafinaritra indrindra any Eropa. Ny fitsangatsanganana an-dalamby mankany amin'ny toerana haleha sy trano tsy ampoizina lavitra ny trano no fomba fitetezana haingana sy mora indrindra.
Te hampiditra ny lahatsoratray bilaogy “1o Toerana Hofan-trano fialan-tsasatra mahafinaritra any Eropa” ve ianao amin'ny tranokalanao? Azonao atao na ny maka ny sary sy ny soratra, ary hanome antsika-bola miaraka amin'ny rohy ity lahatsoratra bilaogy. Na tsindrio eto: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fmg%2Fvacation-rental-places-europe%2F- (Horonan-taratasy midina kely ny mahita ny Embed Code)